what, when, why: Free All in One Media File Format Converter
Free All in One Media File Format Converter
Format Factory एउटा यस्तो फ्री मा उपलब्ध Conversion tool हो जसको मद्घतले तपाईंले audio, video का साथसाथै images को समेट अहिले चलेको फरम्याटहरुमा कन्भर्ट गर्न सक्नु हुन्छ । तपाईंले कन्भर्ट गर्न सक्ने नाम चलेका फरम्याटहरु जस्तै : WMV, AVI, MPG, MP3, WMA, AAC, JPG, PNG, GIF, का साथसाथै अरु पनि । यो software चलाऊन पनि एकदम सजिलो छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा यो एकदम फ्री मा उपलब्ध छ र तपाईंले यसको उपयोग जे purpose को लागि पनि गर्न सक्नु हुन्छ ।
यो software ले Provides गरेका functions हरु बारे एकपल्ट बुझौ ...
@ सबै भिडियो फाइल फरम्याटहरु बाट MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF.
@ सबै अडियो / भिडियो फाइल फरम्याटहरु बाट MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV.
@ सबै इमेज फाइल फरम्याटहरु बाट JPG/BMP/PNG/TIF/ICO/GIF/TGA.
@ डि.भि.डि बाट भिडियो फाइलमा Rip , म्युजिक सि.डि बाट अडियो फाइलमा Rip
@ MP4 फाइल support iPod/iPhone/PSP/BlackBerry फरम्याटहरुमा र अरु पनि धेरै धेरै ....
यो software प्रयोग गर्ने तरिका :
१) सर्बप्रथम यो software download गरेर install गर्नुहोस् ।
२) बाँया तिर भएका Category हरु मध्य आफुलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने फरम्याट छान्नुहोस् ।
३) अब आफुले कन्भर्ट गर्न चाहेको फाइललाई add file मा क्लिक गरेर छान्नुहोस् र ओके गर्नुहोस् । तपाईंले यतिखेरै आउटपुट setting पनि परिवर्तन गर्न सक्नु हुन्छ र यही बाट तपाईंले output फोल्डर पनि छान्न सक्नु हुन्छ ।
४) सबै मिलाई सकेपछि अन्तिममा Start बटन क्लिक गर्नुहोस् ।
केही समस्या परेमा कमेन्ट मा लेख् न नभुल्नु होला ।
afno mobile ma video convert garera rakhnu paryo bhane as bata kun format ma convert garnu parcha?